Umthetho-Wenziwe: Injongo eyakhelweyo, i-SaaS, ukuThengisa okuSekwe kwiLifu | Martech Zone
Umthetho we-In: Injongo eyakhelweyo, i-SaaS, ukuThengisa okuSekwe kwiLifu
NgoMvulo, Septemba 11, 2017 NgoLwesithathu, Septemba 13, 2017 Douglas Karr
Intengiso yale mihla yintengiso yedijithali. Ububanzi bayo bubanzi obubanzi kunye namaqhinga angenayo, ukukhokelela kokuvelisa kunye nezicwangciso zokondla, kunye nokwenza iinkqubo zobomi bomthengi kunye neenkqubo zokukhuthaza. Ukuphumelela, abathengisi bafuna isisombululo sentengiso yedijithali esinobutyebi, eguqukayo, enokusebenzisana nezinye iinkqubo kunye nezixhobo, ezinomdla, ezilula ukuzisebenzisa, ezifanelekileyo nezonga imali.
Ukongeza, iipesenti ezingama-90 zamashishini ehlabathini lonke zincinci; kananjalo namaqela abo okuthengisa. Nangona kunjalo, uninzi lwezisombululo zokuthengisa ezizenzekelayo azenzelwanga ukuhlangabezana neemfuno zemibutho emincinci okanye amaqela amancinci okuthengisa afunyanwa rhoqo ngaphakathi kumashishini amakhulu. Iinkampani ezisebenzisa intengiso ezenzekelayo zibona ukuguqulwa okungcono kwe-107%.
Umthetho-wokuThengisa ukuSombulula isisombululo
Umthetho-On ibonelela ngesoftware-njengenkonzo, isisombululo sentengiso esisekwe kwilifu esivumela abathengisi ukuba babandakanyeke nabathengi kulo lonke ixesha lokuphila labathengi. Iqonga lalo lenzelwe ukunika iinkampani ezincinci neziphakathi lonke ixabiso lenkqubo yokuthengisa izinto ezenzekelayo, ngaphandle kobunzima kunye nezixhobo ze-IT ezifunekayo.
Iqonga loMthetho-kwiqonga livumela abathengisi ukuba benze amaphulo entengiso anqabileyo kwiwebhu, iselfowuni, i-imeyile kunye noluntu. Kubandakanya ukubanakho: ukuthengisa nge-imeyile, ukulandela umkhondo wabatyeleli bewebhu, amaphepha okufika kunye neefom, ukukhokela amanqaku kunye nokondla, ukupapasha kwezentlalo kunye nokukhangela, iinkqubo ezizenzekelayo, uvavanyo lwe-A / B, ukuhlanganiswa kweCRM, ulawulo lwewebhu kunye nokunye.
Nge-Act-On, iinzame zentengiso zinokulinganiswa kwaye zilungiselelwe ngokusekwe kwidatha enzima kunokuba neemvakalelo zesisu. Abathengisi ngokulula:
Lawula nokwandisa onke amanqanaba amava abathengi;
Ukufaka igalelo kwinkcitho kwintengiso;
Landa umkhondo womsebenzi ukusuka kuthethathethwano lokuqala kunye notshintsho kwintengiso evaliweyo kunye nokuphinda ukuthengisa;
Ingxelo ngemikhankaso, ukusuka kumanqanaba aphezulu ukuya kwiidrilldowns ezineenkcukacha.
Iqonga loMthetho-kwiqonga lima ngaphandle ikakhulu ekusebenziseni kwayo kunye nenkxaso yabathengi engalinganiyo: abasebenzisi bahlala phezulu kwaye baqhuba amaphulo abo okuqala kwimiba yeentsuku (iinkqubo zelifa zingathatha iiveki okanye iinyanga) kwaye zifumane inkxaso enikezelweyo (ifowuni / imeyile Ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
I-Act-On ikwahlukile kubuchule bayo bokujongana neemfuno zabathengisi banamhlanje ngokuhlala kuwo onke amabakala ohambo lomthengi kunye nokwenza ukuba intengiso ichukumise onke amabakala obomi babaxhasi (ukusuka kulwazi kunye nokufunyanwa kugcino lwabathengi kunye nokwandiswa). Ukongeza, ivumela abathengisi ukuba badibanise izicelo ezizezona zilungileyo kunye nezixhobo abasele bezisebenzisa, ke banako ukubanakho ukwenza ngokwezifiso izitokhwe zabo zentengiso ukuze zilungele iimfuno zabo zeshishini eziguqukayo.
Umthetho-kwiNdawo yokuTyelelwa kwabaTyeleli beWebhusayithi
Uphando luka-Act-On lubonisa ukuba iinkqubo zentengiso ezilungiselelwe iimfuno zeshishini zivelisa iziphumo eziphezulu kakhulu kunezo zingenjalo. Ukukhanya koku, uMthetho-On kutsha nje ubhengeze ukumiliselwa kwe-Act-On Industry Solutions, elungiselelwe amashishini ahlukeneyo kubandakanya ukhathalelo lwempilo, uhambo, ezemali, ukuvelisa kunye nokuthengisa, kunye nokunye okuzayo. Yenzelwe ukuhambisa i-ROI ephuculweyo kunye nokwamkelwa ngokukhawuleza kokuzenzekelayo kwentengiso, i-Act-On Industry Solutions ibonelela:
umxholo -Iitemplate ezikhethekileyo kumzi-mveliso wee-imeyile, iifom, kunye namaphepha okufika anemizekelo emininzi yomkhankaso onokungeniswa ngokulula / ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kwiiakhawunti;
Iinkqubo -Ukuhamba komsebenzi okuzenzekelayo kwangaphambili ukuxhasa ukukhulisa amanyathelo ngamanyathelo kunye nemikhankaso yokuzibandakanya;
eyona milinganiselo -Ukufikelela kwiziphumo zentsebenzo ehlanganisiweyo yemisebenzi yokuthengisa kumashishini ohlukeneyo
Thatha uKhenketho lweVidiyo loMthetho
Ukuzibandakanya ekuqondeni sisixhobo sokunika ingxelo esibonelela ngokufikelela kwexesha lokwenyani kwi-analytics yomkhankaso wentengiso ngokusebenzisa itemplate ezithunyelwayo nezihlaziyiweyo ngoku zeSpredishithi sikaGoogle kunye neMicrosoft Excel.
Nangona ukuthengisa okuqhutywa yidatha kubaluleke kakhulu kumaphulo kule mihla, ukulawulwa kwedatha kuhlala kungumngeni ophambili kubathengisi beB2B, ngokophando lwakutsha nje. Ulwazi lokuzibandakanya lwenza kube lula ukujonga, ukuthumela ngaphandle kunye nokwabelana ngedatha, eyenza abathengisi baphucule kwaye basebenzise amaphulo abo kwaye yenze idatha yokuthengisa ifikeleleke ngakumbi kwamanye amaqela kumbutho wonke.
UkuThengisa ngokuSebenza kweZona ndlela ziBalaseleyo
Iipesenti ezingama-74 zeenkampani ezisebenzisa i-automation yokuthengisa zibona i-ROI efanelekileyo kwiinyanga ezili-12 okanye ngaphantsi. Yonke inkampani iya kuba neenjongo ezizodwa ezixhasa iinkqubo zayo ezithile zeshishini, kodwa kukho ezona ndlela zilungileyo ezinokunceda ekwenzeni uninzi lwenkqubo yakho yokuthengisa oomatshini:
Ukuphuhlisa inkqubo-sikhokelo yolawulo olusemthethweni Echaza indima kunye nobudlelwane phakathi kwezi zixhobo zintandathu zibalulekileyo zentengiso kunye neenkqubo: idatha, ukukhokela ukucwangciswa, ukukhokela umzila, ukukhokela isiqinisekiso, ukukhokelela ekukhuliseni, kunye neemetwork. Qinisekisa ukuba ukuthengisa kunye nentengiso ziyavumelana kwinyathelo ngalinye, kwaye usebenzise ulwimi olufanayo ukuyichaza.
Ukulungelelanisa iinkqubo zentengiso kunye neenjongo kunye nesebe lokuthengisa. Abathengi bangena kwi-faneli yentengiso kamva kwinkqubo yesigqibo kunangaphambili. Oku kuyinyani kwiinkampani zeB2B kunye neB2C. Oku kuthetha ukuba ukuthengisa akunakususa nje amagama aqinisekisiweyo kwisebe lezentengiso.
Ithala leencwadi lokuzenzekelayo kufuneka ibandakanye umxholo obandakanya umthengi ofundileyo, kwaye umbutho kufuneka ube nimble ngokwaneleyo ukuba unxibelelane namathemba ngokukhawuleza ukuba babonisa injongo yokuthenga.
Jonga izisombululo zokuthengisa ezigxininisa izixhobo kunye namandla kubathengisi, endaweni yeemfuno ze-IT. Ukuzenzekelayo kwentengiso kufuneka kukhokelwe ziingcali zentengiso, hayi i-CIO.
Umthetho-On isebenza ngaphezulu kweenkampani ezingama-3,000 XNUMX ezisuka kubukhulu ukusuka kumashishini amancinci naphakathi ukuya kumasebe amashishini amakhulu, kuluhlu lwamashishini (njengeenkonzo zezemali, ukhathalelo lwempilo, imveliso, isoftware, imfundo kunye netekhnoloji). Abathengi bangoku baquka iXerox, Swarovski, iYunivesithi yaseOhio kunye ne-ASPCA, nelinye lawona matyala anyanzelisayo okuba yimfundo yeLEGO.
Abathengisi baphantsi koxinzelelo olungaphezulu kunakuqala lokuzisa iziphumo kuyo yonke imiba yendlela yokuphila yabathengi. Itekhnoloji yethu ixhobisa abathengisi ukuba basebenzise idatha ukuqhuba izigqibo kwaye bahlengahlengisa indlela ii-brand ezibandakanya ngayo abathengi babo. Ngenxa yoko, abathengisi namhlanje baphendula ngakumbi kwaye bayasebenza, banegalelo ngokuthe ngqo ekukhuleni kwengeniso kunye nokwoneliseka kwabathengi. UAndy MacMillan, u-CEO, u-Act-On Software
Isifundo seMeko yoThengiso-soMthetho
Ukusebenza nootitshala kunye nabalawuli abavela kwi-K-6 ukuphuhlisa izisombululo kunye nezixhobo zokufunda eklasini, i-LEGO Education yajika yathengisa ngokuzenzekelayo emva kokuqonda isisombululo sayo sokuthengisa nge-imeyile. Umthetho-Ngokukhawuleza uzibonakalise ulunge ngakumbi kwiimfuno ezizodwa ze-LEGO, ngenxa yamaxabiso aguquguqukayo kunye namandla anamandla okufumana amanqaku, kwaye yenziwa ukuba isebenze ngokukhawuleza-kwangoko inikezela ukuqonda kwimibhobho yokuthengisa ye-LEGO kunye nokunceda iqela lentengiso lecandelo ukuba libeke phambili phambili kwimikhombandlela engenayo. .
kunye Umthetho-On, Imfundo yeLEGO ikwazile ukuhambisa amaphulo ali-14 azenzekelayo ngonyaka (ukusuka kwiinkqubo zangaphambili ze-imeyile), kwaye ngoku wonwabele Iipesenti ezingama-29 zethemba lokuguqula imeko.
Funda iNqaku elipheleleyo loFundo
tags: vavanyoUmthetho-Onkwintengisoisenzo sentengiso esizisebenzelayoIsoftware esebenza kwisoftwareukuthengisa okuzenzekelayoukuthengisa okuzenzekelayo kwilifuukudityaniswa kwekramUlawulo lobomi bamakhasimendeemail Marketingiifomumaphephakhokelaukukhokela amanqakuuphawu lokuthengisaingxelo ngomkhankaso wentengisoukuthengisa okuzenzekelayo okuzenzekelayoukondlaIntengiso ye-omnichannelishishini lokuthengisa ngokuzenzekelayoUkujongwa kwezentlaloukupapashwa kwezentlaloUlawulo lwewebhuUkulandelwa kweendwendwe kwiwebhusayithi
Abathengisi: Ziqaphele ezi zinto ziphambili ekuthengeni kweBritane
I-Zuora: Zenzekelayo kwiNkqubo yokuThumela kwakhona yokuRhola kunye neMirhumo